🥇 ▷ 'Xbox' Scarlett-ka cusub wuxuu mudnaan siin doonaa heerar sare iyo waqtiyo… ✅
‘Xbox’ Scarlett-ka cusub wuxuu mudnaan siin doonaa heerar sare iyo waqtiyo…
Tan iyo markii cusub Mashruuca Scarlett Xbox Si rasmi ah ayaa loogu dhawaaqay E3-da la soo dhaafay, halkaas oo aan kaliya u naqaanno magaceeda iyo qaar ka mid ah waxyaabaha lagu qeexay, Microsoft ayaa sida muuqata aan bixin faahfaahin badan oo ku saabsan. Sikastaba, agaasimaha qeybta Xbox, Phil Spencer, hadda ayaa waxoogaa shaaca ka qaaday Xog dheeraad ah oo ku saabsan qalabka loo yaqaan ‘Redmond’ console cusub ee carruurta, kaas oo mar labaad dammaanad qaaday inay taasi dhici doonto afar jeer ka xoog badan Xbox One X ee hadda jira.
Wareysigii ugu dambeeyay, Spencer laftiisu wuxuu tilmaamay in mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee lagu helo qalabka cusub uu yahay joogteynta. Taas macnaheedu waa in Microsoft diiradda saari doonto helitaanka wax badan ugufiican waqtigaiyo sidoo kale heerka ugu wanaagsan (Isku day inaad had iyo jeer ku sii jirto) 60 xabbadood halkii labaad) Marka laga soo tago taas, qodobka kale ee muhiimka ah ee ‘Xbox’ cusub waa in la gaaro mid dhammaystiran oo xoog leh la jaanqaadaya cayaaraha hore ee jiilkii hore, raadinaya buugaagta oo dhameystiran.
“Waa inaan hubinaa in afar jiil oo ka kooban, taas oo ah, ciyaaro ku saabsan asalka Xbox One, Xbox 360 iyo Xbox, marka lagu daro jiilka cusub, ay ku socon karaan masraxa cusub.”
Intaas waxaa sii dheer, Phil Spencer wuxuu xaqiijiyey in qalabka wax lagu qoro uu lahaan doono wax “cadaalad ku cusub Microsoft”wuxuuna tusay aaladda “Tani waxay ixtiraami doontaa waafaqsanaanta kontaroolada iyo kontaroolada aad horay u haysay”. Qodobbada ayaa aad u wanaagsan, maaddaama ay u oggolaan doonto kharash yar in la siiyo ciyaartoydu.
iyada oo loo marayo: Engadget